"Ghost" Yakabatwa paCCTV Ichisunda Pamusoro Pedoro Rakanaka
musha	Zvinotyisa SubgenresParanormal	"Ghost" Yakabatwa paCCTV ichisunda pamusoro pedoro rakanaka
Ndiani achabhadhara izvozvo?
by Timothy Rawles November 24, 2021 76,672 maonero
Aive angove masikati chaiwo pane imwe pub yechirungu yakare kusvika munhu kana chinhu akasarudza kukanganisa nguva.
Iri muHendon, Sunderland, iyo Blue Pub yanga ichishanda kwemakore 167. Izvi zvinoreva kuti vanhu vazhinji vakafamba nepamikova yaro uye pamwe vamwe havana kumbobuda.
Vhidhiyo iri pazasi inoratidza murume ari mubhawa achikurukura nevamwe vevashandi vepabhu; doro rine chando parutivi rwake. Mushure mechinguvana, chimwe chinhu chinoshamisa chinoitika: doro rinotsvedza masendimita mashoma pabhawa robva radonhera pamusoro, richiteura zvose zviri mukati maro pamakumbo nepasi.
Chinhu chose chakabatwa nekamera uye nemaitiro evacherechedzi, vanoita sekunge vari kuvhunduka senyoka yenyoka.
Maererano ne Mirror, muridzi, Darla Anderson - uyo anogona kuonekwa muvhidhiyo - anoti hapana imwe tsanangudzo kunze kwemweya nokuti akazviona zvose nemeso ake.
“Ndinorangarira ndakangotarisa papint ichibva yangodonha, taingova vatatu kana vana mubhawa panguva iyoyo saka hapana aikwanisa kuigogodza,” akadaro. SunderlandEcho, "Handisi kuwana chero tsananguro ine musoro yekuti sei zvakaitika, vatengi vedu vese havazvitenda."
Kutaura zvazviri, Darla anoti mumwe munhu anoita zvemidzimu akapinda mubhubhu rake kwasara zuva rimwe chete asati amunyevera kuti pane mweya waivapo.
Kuita kuti zvinhu zvinyanye kunakidza, mushure mekunge Darla aisa vhidhiyo iyi pasocial media, muridzi wekare akamubata ndokuti kana aine bhizinesi zvinhu zvisinganzwisisike zvaizoitika kwaari zvakare, "magirazi asina chinhu aingodonha kubva pabhawa asi haana kumbobvira CCTV yekuitora," Darla akawedzera.
Mutengi akanyikwa nedoro anopokana kuti chiitiko ichi chaive chimwe chinhu kunze kwesainzi pabasa. Anotenda kuti girazi rakasanganiswa negiravhiti ndiro rine mhosva yekudonha. Nekudaro, Darla anoramba akavhurika kune zano iro chipoko chinotambudza imba yake yekare.
Asi, tizivise zvamunofunga vaverengi. Inzwa mumashoko.
Kune imwe nyaya yeparanormal yakabatwa patepi, verenga Tarisa se Ghost Mafungu kubva Mukati meCoffin Nguva pfupi Kuvigwa.